उपत्यकाको पानी पिउनै अयोग्य ! | Hakahaki
उपत्यकाको पानी पिउनै अयोग्य !
काठमाडौं । उपत्यकाको पानी पिउनयोग्य नभएको परीक्षणका क्रममा पुुष्टि भएको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले काठमाडौं उपत्यकाका पानीका विभिन्न स्रोतको परीक्षण गरेको हो । नास्टको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणले उपत्यकाको पानी पिउनयोग्य नरहेको पुुष्टि भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
नास्टले गत वर्ष वैशाखदेखि चैतसम्म करिब १ हजार पानीका नमुुना परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण गरिएकामध्ये कुुनै पनि नमुुनाका पानी पिउनयोग्य नदेखिएको नास्टका प्राविधिकले जानकारी दिए । ‘हामीले यो एक वर्षमा ९ सय २५ वटा नमुुना परीक्षण ग¥यौं’, नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.भोजराज पन्तले भने, ‘संकलित कुुनै पनि पानी ढुुक्कले पिउनयोग्य देखेनौं ।’
नास्टमा दिनहुुँजसो सर्वसाधारणले नै परीक्षण गराउन पानीका नमुुना ल्याउने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो घरका ट्युबवेल, बोरिङ, इनार, ढुुंगेधारालगायतको पानी परीक्षण गराउन ल्याउने गरेको नास्टले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाभरबाट सर्वसाधारणले पानीको नमुुना नास्टमा परीक्षण गर्न दिनहुँजसो ल्याउने गरेका छन् । परीक्षणमा संलग्न प्राविधिक निरु बुुर्लाकोटीले पानीमा ब्याक्टेरिया, आइरन, अमोनिया र नाइट्रेटको मात्रा धेरै देखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रायः सबै पानीको परीक्षणमा एकै खालको समस्या हामीले पायौं । कतै ब्याक्टेरिया भेटियो भने कहीं अमोनिया र नाइट्रेट ।’
ब्याक्टेरिया अन्तर्गत फोहोर र दिसामा हुुने जीवाणुु (कोलिफर्म) पर्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो पानीको परीक्षणमा कोलिफर्म भेटिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुुणस्तर मापदण्ड २०६२ अनुुसार पानीमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुुनुुपर्नेमा परीक्षणमा ३ सय प्रतिशतसम्म पाइएको छ । यति धेरै मात्रामा कोलिफर्मको मात्रा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक पन्त बताउँछन् । ‘यो संख्यामा भन्ने हो भने लाखौं जीवाणुु हुुन्, किनकी हामीले आँखाले नदेखेका मात्र हौं’, उनले भने ।
पिउने पानीमा आइरनको मात्रा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३ प्रतिशत हुुनुुपर्नेमा ५–१० प्रतिशतसम्म भेटिएको छ । रङहीन र गन्धहीन हुनुपर्ने पानीलाई अमोनियाले धमिलो र गन्हाउने (गन्धयुक्त) बनाउँछ । अमोनियाले श्वासप्रश्वास, दमलगायत विभिन्न रोगको संक्रमण हुुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । पानीमा नाइट्रेटको मात्रा धेरै हुुँदा बालबालिकामा अक्सिजन लिनसक्ने क्षमता घटाउने रोग (ब्लू बेबी सिन्ड्रोम) देखिन सक्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अरू समयभन्दा वर्षामा पानी धेरै प्रदूषित हुन्छ । वर्षातका बेला जमिनको सतहमा रहेका फोहोर पानीको स्रोतमा मिसिने हुुँदा पानी पिउन बढी सचेत हुुन आवश्यक ठान्छन् विज्ञहरू । पानीसम्बन्धी अनुुसन्धान गर्दै आएका वैज्ञानिक पन्तले भने, ‘स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पानी प्रयोग गर्दा सधैं सचेत हुुनैपर्छ । तर अरू समयभन्दा वर्षात्का बेला पानीका मुुहान धेरै प्रदूषित हुुन्छन् । त्यसैले वर्षामा हामी बढी संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।’ उनले वर्षा याममा बिरामी हुने मुख्य कारण पानी नै हुन सक्ने बताए ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश सहरमा पानीको खपत र माग बढ्दै जाँदा विकल्पमा सर्वसाधारणले इनार, ट्युबवेल र बोरिङको पानी पिउने गरेका छन् । यस्ता वैकल्पिक स्रोतका पानी पिउनेको संख्या तराईमा सर्वाधिक छ र बढ्दो छ । चिकित्सकहरू सफा देखिए पनि पानीमा विभिन्न जीवाणु/कीटाणुु हुुने हुुँदा उमाल्दा वा फिल्टर गर्दा तुुलनात्मक रूपमा पिउनयोग्य हुने सुझाव दिन्छन् ।